(၄) နှစ်ကြာပြီးနောက် ပထမဆုံးဇာတ်လမ်းကို ရိုက်ကူးဖို့ လက်ခံလိုက်တဲ့ So Ji Sub | Asia News Bar
(၄) နှစ်ကြာပြီးနောက် ပထမဆုံးဇာတ်လမ်းကို ရိုက်ကူးဖို့ လက်ခံလိုက်တဲ့ So Ji Sub
ဝါရင့်မင်းသားကြီး So Ji Sub ရဲ့ ဇာတ်လမ်းတွဲတွေကို စောင့်နေကြတဲ့သူတွေအတွက် ၄နှစ်ကျော်ကြာမြင့်ပြီးတဲ့နောက်မှာတော့ မျှော်လင့်ချက်တွေပြည့်ဝသွားပါပြီ။ မေလတုန်းက “Dr. Lawyer” (working title) ဆိုတဲ့ ဇာတ်လမ်းတွဲသစ်မှာ အဓိကဇာတ်ကောင်နေရာအတွက် So Ji Sub ကို ကမ်းလှမ်းထားခဲ့တာဖြစ်ပြီး ၂ လကြာမြင့်ပြီး ဇူလိုင် ၅ ရက်နေ့မှာတော့ ဒီဇာတ်လမ်းသစ်မှာ ပါဝင်ရိုက်ကူးမယ့်အကြောင်း အတည်ပြုပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။
“Dr. Lawyer” ဆိုတဲ့ဇာတ်လမ်းဟာ ရင်ထဲထိရှိပြီး ခံစားချက်မျိုးစုံကို ပေးစွမ်းနိုင်မယ့်ဇာတ်လမ်းဆိုပြီး နာမည်ထွက်ထားတာပါ။ ဇာတ်လမ်းကတော့.. လုပ်ကြံထားတဲ့ အော်ပရေးရှင်းတစ်ခုကြောင့် အရာရာဆုံးရှုံးခဲ့ရတဲ့ ဆရာဝန်နဲ့ အဆှိုအော်ပရေးရှင်း ကြောင့် မိသားစုနဲ့ချစ်ရသူကို ဆုံးရှုံးလိုက်ရတဲ့ အစိုးရရှေ့နေတို့ဟာ ထပ်မံဆုံးရှုံးစရာဘာမှမရှိတော့တာကြောင့် နှစ်ယောက်ပေါင်းပြီး အပြစ်ခံသင့်တဲ့ ငွေရှင်ဂုဏ်ရှင်တွေကို အကွက်ကျကျလက်စားချေတဲ့အကြောင်းပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
So Ji Sub ကတော့ ဆေးဘက်ဆိုင်ရာပါရဂူဘဝကို လက်လွှတ်ခဲ့ရပြီး ဆေးဖက်ဆိုင်ရာအမှုမှန်စုံစမ်းဖော်ထုတ်တဲ့ရှေ့နေဖြစ်လာသူ Han Yi Han အဖြစ် ပါဝင်သရုပ်ဆောင်သွားမှာပါ။ သူရဲ့ဘဝကို ပြောင်းလဲစေခဲ့တဲ့ အော်ပရေးရှင်းတစ်ခုရဲ့နောက်ကွယ်က ဆန်းကြယ်တဲ့အမှန်တရားကို ဖော်ထုတ်သွားမယ့်ဇာတ်ကောင်ကို ဝါရင့်မင်းသားကြီးအနေနဲ့ ဘယ်လိုမျိုး ရိုက်ကူးသွားမလဲဆိုတာကတော့ စိတ်ဝင်စားစရာပါပဲ။
“Doctor Lawyer” ဇာတ်လမ်းကတော့ အပိုင်း ၁၆ ပိုင်း ပါဝင်မှာဖြစ်ပြီး ၂၀၂၂ ပထမနှစ်ဝက်လောက်မှာ ပြသနိုင်ဖို့ အစီအစဉ်ချထားပါတယ်။ ၄ နှစ်ကြာပြီးမှ ပြန်လည်ရိုက်ကူးတဲ့ ပထမဆုံးဇာတ်လမ်းတွဲဖြစ်တာ‌ကြောင့် So Ji Sub ရဲ့ သရုပ်ဆောင်အရည်အချင်းဟာ အရင်လိုပဲ ဆွဲ‌ဆောင်မှုရှိနေဦးမလားဆိုတဲ့ အတွေးကတော့ မြင့်တက်လျက်ရှိပါတော့တယ်။
Next ကြည့်ရှုနှုန်းမြင့်ခဲ့တဲ့ "Taxi Driver" ဇာတ်လမ်းတွဲကို Season2ရိုက်ကူးသွားမယ်လို့ SBS အတည်ပြု »
Previous « မှုခင်းရုပ်ရှင်ကားမှာ တွဲဖက်သရုပ်​ဆောင်ဖို့ ​ဆွေး​နွေး​နေကြတဲ့ Joo Ji Hoon နဲ့ Han So Hee
ဒရမ်မာပိတ်ကားပေါ်ကိုပြန်လည်ရောက်လာတော့မယ့်Song Jihyo ရဲ့ Was it love? စီးရီးအကြောင်း
Hyun Bin နဲ့ Son Ye Jin တို့ တကယ် တွဲနေကြပါပြီဟု Agency များအတည်ပြု
တောင်ကိုရီးယား ပရိသတ်တွေကြားမှာ မျှော်လင့်ထားသလောက် တုံ့ပြန်ချက်မကောင်းခဲ့တဲ့ “Nevertheless” ဇာတ်လမ်းတွဲ
Jun Ji Hyun နဲ့ Joo Ji Hoon ရဲ့ ဒရမ်မာသစ် Mount Jiri အတွက် အသုံးပြုမယ့် ဘတ်ဂျတ်
၂၀၂၀ အတွင်း စောင့်ကြည့်ရမယ့် ကိုရီးယားဇာတ်လမ်းတွဲ (၇) တွဲ
tvN Drama အသစ် No Touch Princess ရဲ့ ဇာတ်ညွှန်းဖတ်ပွဲ